PressReader - Ilanga: 2019-01-10 - Ufisa ukulingisa kuZalo uMoozlie
Ufisa ukulingisa kuZalo uMoozlie
Ilanga - 2019-01-10 - Ilanga Impilo - SANDILE MAKHOBA [email protected] co.za
ISIPHALAPHALA sentokazi esencane engumethuli wezinhlelo kumabonakude, sinephupho lokulingisa emdlalweni kamabonakude owuchungechunge Uzalo, osakazwa kwiSABC 1. UNomuzi “Moozlie” Mabena (26) ophinde abe ngumculi we-hip hop, uthi uma engathola ithuba lokulingisa kulo mdlalo kungabe kufezeke elinye lamaphupho akhe. Kusukela esemncane ubenesifiso sokuba ngumlingisi.
“Ngikhule ngibukela kakhulu kuLeleti Khumalo, ngifuna ukufana naye uma sengikhulile, yingakho ngingalijabulela ithuba lokuba ngumlingisi womdlalo kamabonakude,” kusho yena.
Ngaphandle koZalo eminye imidlalo kamabonakude athi angakujabulela ukulingisa kuyona, Isithembiso, Isibaya neminye. Konke lokhu ukudalule enkulumeni yakhe ekhethekile neLANGA kulo leli sonto. UNomuzi usanda kunyelwa yinyoni esandleni njengoba eseyinxusa lesiphuzo esihamba phambili komtakabani emhlabeni jikelele iG.H. Mumm. Ungowokuqala wesifazane waseSouth Africa ukuba yinxusa lalesi siphuzo. UNomuzi ungomunye wabesifazane abasebancane kodwa izinto zabo ezihamba kahle. Kuzokhumbuleka ukuthi ithalente lakhe lokucula lagqama ngesikhathi esengaphansi kwenkampani yomculi we-hip hop uK.O, iCashtime.
Ekuhambeni kwesikhathi uNomuzi nabanye abaculi bayilaxaza le nkampani, wabe esezivulela eyakhe iNomuzi Mabena Music okuyimanje ukhiphe kuyo i-Album yakhe esihloko sithi ‘Victory’.
Uthi ukukholelwa kakhulu kuyena qobo yikhona okumsizile ukuze afinyelele lapho ekhona njengamanje. Ukhuthaza abesifazane abasebancane ukuba bazethembe, bakwazi ukusukuma bazimele ukuze bezophumelela.
Uthi wayefuna ukuqala ibhizinisi elizofukula abesifazane abadonsa kanzima kwezamabhizinisi kodwa kwangenzeka, wagcina evule inkampani yomculo.
“Umuntu wesifazane unamandla ehlula awendoda, wukuthi nje iningi labo alikuboni lokho, bazi ukuthi ukuze uye phambili kumele uncike kumuntu othize ozokusiza,” esho.
Yize noma ezigqaja ngokusebenza kwakhe kanzima kodwa uthi akayedwa, bakhona abamsizayo.
“Ngeke ngikwazi ukuziphakamisa ngedwa ngizincome sengathi ngisebenza ngedwa, ithimba lami engisebenza nalo eNomuzi Mabena Music yilona elenza umsebenzi omningi.” Uthembisa lukhulu kulo nyaka njengoba eseyinxusa le-G.H. Mumm. Uthi ufuna ukuqopha umlando, ashiye abale nkampani bezishaya isifuba.
“Ukuba yinxusa leMumm akuzukuba ukuphuza amashampeni nje kuphela kodwa ngibafihlele induku emqubeni.”
Abantu abaningi bazombona emcimbini omkhulukazi wamahhashi iSun Met, oxhaswe yiyona iMumm, ozobe useCape Town ekupheleni kwenyanga. Uthi lapho uzobe egila izimanga ngemfashini kanye nokunye.
Endimeni yezomculo uthi ubukela kakhulu ku-AKA, uthi uchazwa yindlela u-AKA asabenza ngayo.
“Angazi noma kwenziwa ukuthi ngimjwayele yini kodwa ngisho ukhuluma naye u-AKA uyayithola into ezokuyisa phambili enkulumeni yakhe, yingakho ngimthatha njengomuntu osesebenzile kule ndima,” kuqhuba yena.
Ukhuluma ngo-AKA nje, umpikile engomeni yakhe esihloko sithi ‘Pray’ lapho ehambisana khona noYanga naye u-AKA.
UNomuzi uthi abazali bakhe basekhona bobabili futhi bayazigqaja ngemisebenzi yakhe. Uthi usahlala nabo abazali eBenoni,
eGoli. Unina usasebenza, unguthisha kwesinye sezikole ezikhona endaweni. Kulo nyaka akazukukhipha mculo kodwa uthi uzokhipha amavideo ezingoma ezintathu.